သွေးတိုးရောဂါရှိသူတို့ ဆင်ခြင်သင့်သည့် အစားအသောက်များ
အသည်းအစားထိုးဖို့ ဆရာဝန်တွေ လက်လျှော့လိုက်ပေမယ့် သစ်မြစ်သစ်ဥတွေကြောင့် ကင်ဆာဝေဒနာ သက်သာလာသူ ကိုစိုင်းလေးဝင်း
အူပိတ်ခြင်း (Intestinal Obstruction)
ပါမောက္ခဦးစောဝင်း ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး မေး။ ။ ဆရာ့ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ‘သွေးလွန်တုပ်ကွေး အန္တရာယ်ကင်းဂါထာ’ဆိုတော့ ဆရာက ဂမ္ဘီရ ပညာလည်းဝါသနာပါတယ် ထင်တယ်နော်။ ဖြေ။ ။ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ဂါထာတို့၊ မန္တာန်တို့က တိုတိုတုတ်တုတ်တွေမို့ မှတ်သားရလွယ်ကူစေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရေးဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့...
အပြင်စာသိပ်မစားတာတောင် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောများနေလို့ ဂရုစိုက်နေတဲ့ မေသန်းနု
– မဆင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံစံလေး သိချင်ပါတယ်။ မဆင့်ကတော့ ကျန်းမာရေးကိုအမြဲတမ်း ဆန်းစစ်တယ်၊ သုံးသပ်တယ်။ အစာကို ပုံမှန်စားတယ်။ ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို တစ်နှစ်တစ်ခါ ပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။ – မဆင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ၀ိတ်အရမ်းတက်လာတာမျိုး မရှိအောင် ဘယ်လိုထိန်းဖြစ်လဲ။ အဓိကကတော့ အစားအသောက်ပါပဲ။ မဆင့်...
ကြည်လင်ရှင်းသန့်သည့် အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံး အစားအသောက်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက ကူးစက်ပိုးတွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ၀က်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို တွန်းလှန်ပေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအစားအသောက် ဒီအစာတွေနဲ့ အာဟာရတွေက အရေပြားကနေ ၀က်ခြံဖြစ်စေတဲ့...
လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်သူနှင့် အထိုင်များသူအကြား ကျန်းမာရေး ကွာဟချက်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ဖြစ်သူတွေ နည်းပါးလာပြီး အထိုင်များသူတွေ မြင့်မားလာပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်သူနဲ့အထိုင်များသူအကြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင် . .။ (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy...
မိုးတွင်းကာလ နေ့စဉ်စားသင့်သည့် သဘာဝအစာများ
မိုးတွင်းကာလ တစ်လျှောက်လုံး အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဝေဒနာနဲ့ နာမကျန်းဖြစ်တာတွေ သက်သာစေဖို့ အောက်ပါ သဘာဝအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ (၁) အချဉ်အရသာရှိသည့် သစ်သီးများ အချဉ်အရသာရှိတဲ့ လိမ္မော်သီးလိုသစ်သီးတွေ ကို စားတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို စွန့်ထုတ် ပေးပါတယ်၊...
သင်အကြိုက်ဆုံး ကားအမျိုးအစားက သင့်အကြောင်း ပြောပြနေပါတယ်
၊ ကိုထက် ၊ လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေ မတူညီကြပါဘူး။ လူငယ်တွေက ပြိုင်ကားတွေမောင်းချင်တယ်၊ လူကြီးတွေက ဇိမ်ခံကားတွေသဘောကျတယ်၊ တချို့ကလည်း အကြမ်းခံတဲ့ကား သဘောကျတယ်စသဖြင့် ကွဲလွဲနေကြပါတယ်။ ဘယ်လိုကားကို သဘောအကျဆုံးလဲဆို တာပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားရှိတတ်သလဲဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကို ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ...
သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့ ဘာစားသင့်သလဲ . . .
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ . . . ခရမ်းချဉ်သီး စားပါ။ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါအန္တရာယ် လျော့ကျစေဖို့ ရွှေဖရုံသီး စားပါ။ နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါ သက်သာစေဖို့ လိမ္မော်သီး စားပါ။ အသားဝါဖြစ်တာ သက်သာစေဖို့ . . . တလည်းသီးဖျော်ရည် သောက်ပါ။...
မိုးတွင်းကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျန်းမာစေမည့် နည်းများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) အစာပူပူ စားပါ၊ စွပ်ပြုတ်ပူပူ သောက်ပါ မိုးရာသီမှာ မချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိမ်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး အစာပူပူ၊ စွပ်ပြုတ်ပူပူ စားပေးပါ။ ခြင်နှိမ်နင်းရေး အလေးပေးပါ မိုးတွင်းဝင်လာတာနဲ့ မိဘအများစုဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းက ဘယ်လို အာနိသင်ရရှိစေတာလဲ . . .
၊ ကိုထက် ၊ – ပြေးခြင်း အဆုတ်စွမ်းအင် တိုးစေပါတယ်။ – လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း ကြွက်သားနဲ့ အဆီတွေကို သန်စွမ်းကျန်းမာစေပါတယ်။ – ဆတ်ခနဲ ရှေ့သို့လှမ်းခြင်း တင်ပဆုံရိုး ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။ – အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ဗိုက်အဆီတွေကို...
ဘယ်သူ ပျော်ရွှင်သလဲ . . .
စူး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) ကျီးကန်းတစ်ကောင်က သစ်တောထဲနေပြီး ဘ၀မှာ ကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ သူကငန်းတစ်ကောင်ကို တွေ့တော့ “ ဒီငန်းက အသားဖြူလိုက်တာ၊ ငါကတော့ မည်းလွန်းတယ်၊ ဒီငန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ဆုံး ငှက်ပဲဖြစ်ရမယ် ”လို့...
Page 291 of 417« First‹ Previous287288289290291292293294295Next ›Last »
ဆီးချိုရောဂါရှင်များအနက် ၆၀ရာခိုင်နှုန်းသည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနေသည်ဟုဆို
ကုသမှုခံယူပြီး ၁၅ နှစ်အကြာတွင် ရင်သားကင်ဆာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိဟုဆို